SMARTXBOT NET89 - Ukuhweba Robot - EUR / USD
I-robot yokuhweba kwangaphambili
SmartXBot, owayekade NET 89 is a indonesian yokuhweba irobhothi ngokuya nge-Forex (imakethe yemali). Lokhu kudayisa kuphela idola le-euro. SmartXbot ihlose ukuthola i-1% yedolobha lakho usuku ngalunye. Leli robhothi lisebenza ngemodi ye-scalping futhi livula indawo eyodwa ngasikhathi ngenkathi liqinisekisa ukwehla okuphansi kakhulu. Iphephe ngokuphelele, i-SmartX iyeka ukuhweba emini uma ihlanganisa ukulahleka okungu-2 okungalungile.
Bhalisa ku SmartXbot I-Net89 okokufundisa
Intengo yamarobhothi yeNet89
Imali encane / iRobot
Izinzuzo zerobhothi SmartXbot / Net 89
Phatha futhi ulawule izimali zakho usebenzisa izinhlelo zokusebenza MetaTrader 4. Faka idiphozi bese ukhipha noma kunini. Nguwe kuphela onokufinyelela kutshalo-mali lwakho: Isikhwama sokuqala + Izinzuzo ezikhiqizwayo.
Iminyaka engu-2 yesipiliyoni
Iminyaka emi-2 yokuhlolwa ezimeni zangempela zemakethe.
Qala isipiliyoni ngemali encane eyi- $ 600.
Brokerabalingani Smartxbot I-Net89.
UNdunankulu Womhlaba Wonke
Ikhodi yokubhalisa yeGlobalPremier: 913341
IGlobalPremier, broker umlingani kusukela ngoMeyi 2020.
UMaxGlobal, broker umlingani webhizinisi lokuhweba Smartxbot I-Net89.
I-HotForex, broker kulawulwa kuyatholakala kumakhasimende e-VIP ase-Asia.
IZenTrade, broker umlingani webhizinisi lokuhweba Smartxbot I-Net89.
Okwesikhashana, i- broker IGlobalPremier ibekwe eceleni kumalungu amasha kuphela.
Kuma-alumni asevele aqinisekisa i-akhawunti yawo ku-Global Premier futhi i-robot lawo lisebenza, lokhu akuyona inkinga.
Okwabo bonke manje abafisa ukubhalisa ku- SmartxBot INet89, yazi lokho Angisahlinzeki ngosizo lobuchwepheshe kuze kuvulwe kabusha i- broker I-GlobalPremier yabasebenzisi abasha.
Irobhothi lokuhweba eliqala ngalo 3Eme ngonyaka.
Inhloso ye-SMI ukunikeza utshalomali:
kunenzuzo (250% ngonyaka)
kufinyeleleka (kusuka ku- € 500 enhlokodolobha)
kuvikelekile (1,5% max ukulahlekelwa / isikhundla)
Smartxbot INet89 isebenza ngokuzenzekelayo ngaphandle kokungenelela komsebenzisi. Akaguquki, uyashesha futhi unembile ezikhundleni azithathayo.
The Bona izibalo ze SmartXbot INet89 ku-MyFxBook
Inkampani yase-Indonesia i-PT SMI ithuthukisa irobhothi Smartxbot I-Net89.
Kuvulelwe ukumakethwa e-Indonesia kuphela.
Ukuvulwa kokumakethwa kuwo wonke umhlaba.
Abatshalizimali abangaphezu kuka-20 000 basebenzisa le bot yokuhweba nge-euro. Igoli lika-1% ngosuku libe nempumelelo engama-90% selokhu lasungulwa. Irobhothi alisebenzi ngezimpelasonto futhi liyayeka ukuhweba ngosuku lapho kufinyelelwa khona inhloso.
Ukwabelana Ngenzuzo ku SmartXBot / Net89
Ithebula elingezansi likhombisa ukuwina kwakho okucatshangelwayo ngokuya ngamanani afakiwe kanye nohlobo lokwabelana. Khumbula ukuthi kuzoba nokulahleka okungaba ngu-15% lapho uthola ama-winnings akho nomthengisi.
Ukutshalwa kwemali emhlabeni jikelele
I-Robot (1/5) + Inhlokodolobha (4/5)
Inzuzo yansuku zonke
ngemuva kokwabelana ngenzuzo
Kulinganiselwa inzuzo yenyanga
2,5 $ (0,5%) I-50 $ / ngenyanga
5 $ (0,5%) I-100 $ / ngenyanga
7,5 $ (0,5%) I-150 $ / ngenyanga
10 $ (0,5%) I-200 $ / ngenyanga
13,75 $ (0,55%) I-275 $ / ngenyanga
16,5 $ (0,55%) I-330 $ / ngenyanga
19,25 $ (0,55%) I-385 $ / ngenyanga
22 $ (0,55%) I-440 $ / ngenyanga
24,75 $ (0,55%) I-495 $ / ngenyanga
30 $ (0,6%) I-600 $ / ngenyanga
45 $ (0,6%) I-900 $ / ngenyanga
60 $ (0,6%) $ 1 / ngenyanga
87,5 $ (0,7%) $ 1 / ngenyanga
105 $ (0,7%) $ 2 / ngenyanga
140 $ (0,7%) $ 2 / ngenyanga
200 $ (0,8%) $ 4 / ngenyanga
450 $ (0,9%) $ 9 / ngenyanga
U-10% umholo wanyanga zonke ngeNet89
Qala ukuhweba nge SmartXbot Net 89
Vula i-akhawunti ye-Exchange
Bhalisa ku SmartXbot
Ipulatifomu yokuxhuma ehlose ukusebenzisa irobhothi lakho lokuhweba.
Bhalisa kuNdunankulu Womhlaba Wonke
Eyodwa kwezingu-3 brokerumeluleki njengamanje ozinikele endaweni yesikhulumi SmartXbot.
Isinyathelo 1 / SmartXbot
Bhalisa ku Smartxbot / Net89.
Uncamela ukubhaliswa kwekhompyutha. Qala ukusebenzisa umsebenzi Uhlelo lwe-Eco on I-ROBOTSMARTX. Khetha igama lomsebenzisi ngaphandle kwesikhala, i-imeyili yakho, izwe kanye nenombolo yakho yeselula.
Bhalisa ku SmartXbot / Net89
Qinisekisa ukubhaliswa kwakho nge-imeyili.
Uzothola imeyili yokuqinisekisa. Khumbula ukugcina i- iphinikhodi yamukelwe kule imeyili efanayo. Ngena ngemvume futhi ku https://smartxbot.com futhi wamukele imigomo yokusebenzisa kwabo.
✅ Uma ungenayo i-akhawunti ye-cryptocurrency, ngiyakweluleka, khona manje, ukudala eyodwa ku- Binance. Uzodinga kuzinyathelo ezilandelayo.
Thola ifayela lami le- okokufundisa Binance.
Isinyathelo 2 / UNdunankulu Womhlaba Wonke
Ukubhaliswa ku- broker IGlobalPremier nokuqinisekisa nge-imeyili.
Ngaphambi kokuya kuleli kheli, kopisha le nombolo 🔔 913341 : https://crm.globalpremier.com/register
Gcwalisa zonke izinkambu ezidingekayo.
Ungakhohlwa ikhodi yokudlulisela 913341
Ukuze ukwazi ukuxhumanisa irobhothi ne- broker, khumbula ukuhlanganisa "ikhodi yokudlulisela": 913341
Uma ingekho, irobhothi lakho ngeke lisebenze, ngeke sikwazi ukukusiza uma kuba nenkinga futhi kuzofanela uphinde ubhalise.
Uma usuqedile, vula imiyalezo yakho bese uqinisekisa i-akhawunti yakho.
Isinyathelo 3 / UNdunankulu Womhlaba Wonke
Dala i-akhawunti yakho ku IGlobalPremier
Qhubeka I-akhawunti yami, bese "Engeza i-akhawunti".
Gcwalisa izinkambu eziningi ngangokunokwenzeka.
Uma i-ID yakho ye-Meta iqala ngo- 21, ukuthi lokhu kulungile.
Account Type : Njalo
Iphasiwedi Ye-Master: Sebenzisa efanayo naleyo ye- Smartxbot
Iphasiwedi yabatshalizimali: Sebenzisa okufanayo ne-Master Password noma entsha
Isinyathelo 4 / UNdunankulu Womhlaba Wonke
Ziqedele Imininingwane yasebhange.
Iya kuthebhu Ukuhoxiswa. Gcwalisa imininingwane yasebhange.
Chofoza ku- "Bank i-akhawunti ", bese kuthi" Faka i-akhawunti "ngakwesokudla.
Khetha USDT bese ugcwalisa ikheli lakho USDT.
On Binance, Theikheli USDT ukhona kulesi sixhumanisi.
Isinyathelo 5 / UNdunankulu Womhlaba Wonke
Qinisekisa ubuwena ku- IGlobalPremier
Kusese "Ukuhoxiswa", chofoza ku- "verification verification" bese ugcwalisa inombolo kamazisi wakho bese unamathisela isithombe sayo.
Isinyathelo 6 / Smartxbot
Ukuxhumana phakathi UNdunankulu Womhlaba Wonke kanye Smartxbot
Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho Smartxbot. Chofoza kuthebhu ethi "Iphrofayela" bese "update profile ". Bese uchofoza ku-"i-meta ID"bese ukhetha ifayela le- broker IGlobalPremier. Faka i- "meta id" yakho (isinyathelo 3) bese "iphasiwedi yakho yokuhweba" kanye neyakho "iphinikhodi" Smartxbot (I-imeyili) futhi uyonga.
Isinyathelo 7 / Smartxbot
Thenga ilayisense lakho SmartXbot I-Net89.
Khetha Forex futhi broker IGlobalPremier.
Intengo yerobhothi ilingana no-1/5 wotshalo-mali lwakho ku- broker.
Isibonelo selayisense nediphozithi:
$ 100 ilayisense, uma idiphozi $ 500
$ 300 ilayisense, uma idiphozi $ 1500
$ 1000 ilayisense, uma idiphozi $ 5000
Isinyathelo 8 / Smartxbot
Hlela i-invoyisi yakho yokuqala yerobhothi Smartxbot
Chofoza Phrinta, inkokhelo USDT Inani lizobe selicelwa. Uzodinga ukudlulisela inani eliqondile kukheli USDT Isikhwama senkampani esiphethe irobhothi. Gcina i-invoyisi kahle, uzocelwa yona ngokuhamba kwesikhathi.
Le invoyisi ihambelana nokuthengwa kwelayisense lakho.
Isinyathelo 9 / UNdunankulu Womhlaba Wonke
Hlela i-invoyisi yakho yokuqala ye- broker UNdunankulu Womhlaba Wonke
Iya kusayithi UNdunankulu Womhlaba Wonke, kuthebhu Idiphozithi. Umthengisi ngu I-Podosugi. Isebenzisa kuphela i-USDT njengendlela yokukhokha. Ngakho-ke kufanele ukhombise intengo yakho ngamadola aseMelika.
Isinyathelo 10 / UNdunankulu Womhlaba Wonke
Dlulisela imali ku broker UNdunankulu Womhlaba Wonke
Uma usuchofoze inkinobho ethi "Idiphozithi", kufanele uthumele imali ngqo ekhelini USDT wakho broker.
Ukuze wenze lokhu, buyela ku- Binance kule url, bese uthumela inani eliqondile. Ungakhohlwa ukusebenzisa inethiwekhi ye-Ethereum (ETH) ERC20 bese ungeza enanini lokuqala imali yokudluliswa kwe- Binance.
Isinyathelo 11 / MetaTrader 4
Landelela umholo wakho nge MT4.
Kuyinto isicelo ephathekayo. Noma ngabe uku-Android noma i-Ios, uzothola mahhala ezitolo.
Uma sekufakiwe, sizoyibeka ku-akhawunti yakho yokuhweba. Ukuze wenze kanjalo, iya kusayithi UNdunankulu Womhlaba Wonke.
Emkhakheni wokusesha, bhala: GlobalPremier-Live
Ungayithola kuwebhusayithi yeGlobalPremier> My Accounts (MT4 ID)
Isinyathelo 12 / GlobalPremier
Buyisa ukuzuza kwakhe kurobhothi Smartxbot INet89 ku IGlobalPremier.
Buyela kuwebhusayithi ye broker IGlobalPremier. Chofoza ku- I-akhawunti yami, kunkinobho ethi "Isenzo", khetha u- "Hambisa ibhalansi" bese ukhombisa inani ofisa ukulithola.
Bese ubuyela ekhasini eliyisiqalo bese uqhafaza Phuma, bese kunkinobho ethi "Cela Ukuhoxiswa".
Khetha i-PODOSUGI exchanger (Reza Shahrani). Khombisa inani ofisa ukulikhipha. I-exchanger izothatha ikhomishini yayo ngokudlula. Fakela isicelo.